မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-19 ဒီမျိုးကွဲသစ်တွေ့တာ ရက်သတ္တပတ် (၄) ပတ်ရောက်လာချိန်မှာ၊ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံအရ ပိုးတွေ့ အရမ်းမများလာအောင် ပြင်ဆင်ဖို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေ သတိပေးနေပါတယ်။
အရင်ကထက် ကူးစက်မြန်လွန်းတဲ့ မျိုးကွဲသစ်ကနေ လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက လူအများကြီးကို ရုတ်တရက် မကူးစက်ရေး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရာမှာ၊ လက်ရှိဘယ်လောက် ကူးစက်နေတာသိဖို့ ဆေးစစ်တာတွေ တိုးချဲ့ လုပ်သင့်လာပါပြီ။ ကူးစက်မူ တဟုန်ထိုးမြင့်မားခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ကူးစက်မူစခဲ့တဲ့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေ အတွေ့အကြုံအရ ပျမ်းမျှ သတင်းပတ် (၂) ပတ်ကျော်မှာ ပိုးတွေ့မူ စများလာနိုင်ပြီး၊ (၆) ပတ်နဲ့ (၈) ပတ်အတွင်းမှာတော့ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်နိုင်ကာ၊ နောက် တဖြည်းဖြည်း ပြန်ကျလာနိုင်တာ တွေ့ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတကာမှာလောက် အများကြီး ဆေးမစစ်နိုင်သေးပေမဲ့ ရနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေအရလည်း Omicron ကူးစက်မူ စများလာတဲ့သဘော ပြနေပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ အခုလို များများဆေးစစ်နိုင်တာကြောင့် ပိုးတွေ့သူတွေကို သီးသန့်ခွဲနေစေတာ (Quarantine)၊ အလုပ်ဆက် မဆင်းစေတာ၊ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ အတူနေ သက်ကြီးလူအိုတွေကို ဆေးစစ်ပေးပြီး ကူးစက်မြန်လွန်းတဲ့ပိုး အမြန်ပိုမကူးအောင်နဲ့ အသက်ပိုမဆုံးရူံးရအောင် ကာကွယ်နိုင်တာပါ။ ဒါ့အပြင် ကိုဗစ်လူနာများလာပြီး လိူင်းလိုတက်လာချိန်မှာ၊ နောက်အထောက်အကူ ပြုနေတာကလည်း ကာကွယ်ဆေး အများရထားတာအပြင်၊ အောက်ဆီဂျင်ပေးတာလို အရင်သက်သာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာတွေ သိထား ကြိုပြင်ထားတာနဲ့၊ ဆေးဝန်ထမ်းတွေ ရုတ်တရက် ကူးစက်ခံရပြီး၊ လျှော့ကျမသွားနိုင်အောင်ပါ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ကြလို့ပါ။ အမေရိကန်မှာ အခုလို လူနာတွေ တက်လာချိန်မှာ ဆေးစစ်မူနိုင်နင်းအောင်နဲ့ ဆေးစစ်တဲ့နေရာရှိ လူစုလူဝေးကနေ ပိုကူးမသွားအောင်လည်း၊ ပုံမှန်စစ်တာအပြင်၊ လွယ်လွယ်စစ်နိုင်တဲ့ ယာယီရွေ့ လျား (Mobile) ဆေးစစ်တဲတွေ ဖွင့်ပေးပြီး ပေါင်မုန့်ပုံကားတွေနဲ့ လမ်းထောင့်တွေမှာ အမြန်စစ်ကရိယာ (Test Kits) သုံးပြီး စစ်ကာ လူစုခွဲလိုက်နိုင်တာပါ။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်က ပုဂ္ဂလိက ဆေးဆိုင် ဆေးဌာနတွေမှာလည်း Antigen Test Kit လို့ ခေါ်တဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကိုဗစ် ပိုးရှိမရှိ သိနိုင်တဲ့ အမြန်စစ်ကရိယာတွေကို ဈေးချိုချိုနဲ့ ရောင်းချပေးနေတာအပြင်၊ အစိုးရကလည်း အခမဲ့ အိမ်တိုင်းကို ဖြန့်ဖြူးပေးနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တာဝန်ရှိသူတွေ အခုလို တိုးချဲ့ စစ်တာတွေ မလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သေးချိန်မှာ၊ ငွေကြေးပြည်စုံသူတွေအနေနဲ့ အလှူဒါနအဖြစ်၊ Test Kit တွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းတွေကနေ အလွယ်တကူ တင်သွင်းထားကာ၊ ဒီ အမြန်စစ်ကရိယာတွေကို စာသင်ကျောင်းတွေ၊ ဖုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ ဒေသန္တရဆေးပေးခန်းတွေနဲ့ အလုပ်နေရာ (စက်ရုံအလုပ်ရုံ) တွေကို ကူညီပေးပြီး၊ အခမဲ့ စစ်ပေးဖို့ ပြင်ဆင်သင့်ပါပြီ။ အခုလို ပိုစစ်ပေးတာကြောင့် ကူးစက်ခံရသူ ပိုများများတွေ့လာတာက လုပ်ငန်းတွေအတွက် တကယ့်ပြဿနာမဟုတ်ဘဲ၊ မကူးဘဲ ကျန်နေသူတွေနဲ့ ဖြည့်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ့် ကြောက်စရာ ပြဿနာက ကူးစက်ခံရမှန်း မသိဘဲ အပြင်မှာ သွားလာ၊ အလုပ်ဆက်လုပ်နေရသူတွေကြောင့် ကူးစက်မြန်ပိုး တခြားသူတွေကို တဟုန်ထိုး ကူးစက်ပြီး ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်သွားနိုင်တာပါ။ ဒီရောဂါအတွက် ကုသဆေး မရှိသေးချိန် ကာကွယ်တာပဲ တတ်နိုင်တာမို့ ပုံမှန် Mask တပ်တာကို အပြင်ထွက်တိုင်း၊ အထူးသဖြင့် အလုံပိတ် စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဈေးကြီးတွေနဲ့ ဘတ်စကားတွေမှာ မဖြစ်မနေတပ်ဖို့၊ Mask မရှိသူတွေကို အခမဲ့လှူဒါန်းပေးပြီး တပ်လာအောင် စောင့်ကြည့်တိုက်တွန်းပေးသင့်ပါပြီ။ အပြင်ကနေ ပြန်ရောက်လာတိုင်းလည်း အိမ်မှာ အလုပ်မှာ လက်ပြန်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အခုလိုအချိန်မှာ ကိုဗစ် သံသယလက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာပါလည်း လူတိုင်း ဆေးစစ်နိုင်လျှင် စစ်ပြီး၊ မစစ်နိုင်လျှင်တော့ သီးသန့်ခွဲနေ အလုပ်မဆင်းဘဲ အနည်းဆုံး (၅) ရက် သက်သာသည်အထိ နေသင့်ပါတယ်။ ဖျားနာချိန်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အောက်ဆီဂျင်တိုင်းတာ၊ ရေများများသောက်တာ၊ ဖြစ်လာတဲ့ လက္ခဏာတွေ သက်သာတဲ့ (ဥပမာ အဖြစ်များနေတဲ့ လည်ပင်းနာလာလျှင် လည်ပင်းနာသက်သာစေတဲ့၊ ဖျားလာလျှင် အဖျားကျစေတဲ့) ဆေးတွေသောက်တာတွေ လုပ်ပါက၊ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပြန်သက်သာသွားလေ့ ရှိပါတယ်။ အစားအသောက် ပျက်တာနဲ့ အလုပ်မလုပ်ချင်အောင် နှုန်းချည့်လွန်းတာတွေလည်း ဖြစ်လေ့ရှိတာမို့ အနားယူသင့်ပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာ အရှေ့ တောင်အာရှနဲ့ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်း Omicron ကုးစက်မူများလာနေပြီး၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးတားသူတွေနဲ့ အရင်မျိုးကွဲ Delta ကူးစက်ခံခဲ့ဖူးသူတွေမှာပါ ဒီပိုးသစ် Omicron က အလွယ်တကူ ကူးနေတာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Omicron ဖြစ်လာလျှင် ဒီကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူတွေနဲ့ အရင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတွေမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တာနည်းပြီး၊ အချိန်တို (၅ ရက်ဝန်းကျင်) အတွင်း သက်သာသွားတာ များတာကိုတော့၊ နိုင်ငံတကာမှာ တွေ့ထားတာမို့ ကာကွယ်ဆေးရလျှင်လည်း အမြန်ထိုးထားသင့်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရှိနားလည်အောင် ကိုဝင်းမင်းက နယူးယောက်မြို. Wyckoff Heights ဆေးရုံက ညွန်ကြားရေးမှူးနဲ့ မြန်မာပြည်က ကိုဗစ်လူနာတွေကိုလည်း ဖုန်းကတဆင့် ကူညီကုသပေးနေတဲ့၊ ကူးစက်ရောဂါအထူးကု ဒေါက်တာဇေယျာသက် ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈ-19 ဒီမြိုးကှဲသဈတှတေ့ာ ရကျသတ်တပတျ (၄) ပတျရောကျလာခြိနျမှာ၊ နိုငျငံတကာအတှအေ့ကွုံအရ ပိုးတှေ့ အရမျးမမြားလာအောငျ ပွငျဆငျဖို့ ကနျြးမာရေးပညာရှငျတှေ သတိပေးနပေါတယျ။
အရငျကထကျ ကူးစကျမွနျလှနျးတဲ့ မြိုးကှဲသဈကနေ လာမယျ့သတငျးပတျတှအေတှငျး မွနျမာနိုငျငံက လူအမြားကွီးကို ရုတျတရကျ မကူးစကျရေး ကွိုတငျပွငျဆငျရာမှာ၊ လကျရှိဘယျလောကျ ကူးစကျနတောသိဖို့ ဆေးစဈတာတှေ တိုးခြဲ့လုပျသငျ့လာပါပွီ။ ကူးစကျမူ တဟုနျထိုးမွငျ့မားခဲ့တဲ့ အမရေိကနျနဲ့ ကူးစကျမူစခဲ့တဲ့ တောငျအာဖရိကနိုငျငံတှေ အတှအေ့ကွုံအရ ပမျြးမြှ သတငျးပတျ (၂) ပတျကြျောမှာ ပိုးတှမေူ့ စမြားလာနိုငျပွီး၊ (၆) ပတျနဲ့ (၈) ပတျအတှငျးမှာတော့ အမွငျ့ဆုံးအဆငျ့ကို ရောကျနိုငျကာ၊ နောကျ တဖွညျးဖွညျး ပွနျကလြာနိုငျတာ တှထေ့ားပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ နိုငျငံတကာမှာလောကျ အမြားကွီး ဆေးမစဈနိုငျသေးပမေဲ့ ရနိုငျတဲ့ အခကျြအလကျတှအေရလညျး Omicron ကူးစကျမူ စမြားလာတဲ့သဘော ပွနပေါတယျ။
နိုငျငံတကာမှာ အခုလို မြားမြားဆေးစဈနိုငျတာကွောငျ့ ပိုးတှသေူ့တှကေို သီးသနျ့ခှဲနစေတော (Quarantine)၊ အလုပျဆကျ မဆငျးစတော၊ အန်တရာယျရှိနိုငျတဲ့ အတူနေ သကျကွီးလူအိုတှကေို ဆေးစဈပေးပွီး ကူးစကျမွနျလှနျးတဲ့ပိုး အမွနျပိုမကူးအောငျနဲ့ အသကျပိုမဆုံးရူံးရအောငျ ကာကှယျနိုငျတာပါ။ ဒါ့အပွငျ ကိုဗဈလူနာမြားလာပွီး လိူငျးလိုတကျလာခြိနျမှာ၊ နောကျအထောကျအကူ ပွုနတောကလညျး ကာကှယျဆေး အမြားရထားတာအပွငျ၊ အောကျဆီဂငျြပေးတာလို အရငျသကျသာအောငျ လုပျပေးနိုငျခဲ့တာတှေ သိထား ကွိုပွငျထားတာနဲ့၊ ဆေးဝနျထမျးတှေ ရုတျတရကျ ကူးစကျခံရပွီး၊ လြှော့ကမြသှားနိုငျအောငျပါ ကွိုတငျပွငျဆငျထားနိုငျကွလို့ပါ။ အမရေိကနျမှာ အခုလို လူနာတှေ တကျလာခြိနျမှာ ဆေးစဈမူနိုငျနငျးအောငျနဲ့ ဆေးစဈတဲ့နရောရှိ လူစုလူဝေးကနေ ပိုကူးမသှားအောငျလညျး၊ ပုံမှနျစဈတာအပွငျ၊ လှယျလှယျစဈနိုငျတဲ့ ယာယီရှလြေ့ား (Mobile) ဆေးစဈတဲတှေ ဖှငျ့ပေးပွီး ပေါငျမုနျ့ပုံကားတှနေဲ့ လမျးထောငျ့တှမှော အမွနျစဈကရိယာ (Test Kits) သုံးပွီး စဈကာ လူစုခှဲလိုကျနိုငျတာပါ။ ဒါ့အပွငျ အမရေိကနျက ပုဂ်ဂလိက ဆေးဆိုငျ ဆေးဌာနတှမှောလညျး Antigen Test Kit လို့ ချေါတဲ့ မိနဈပိုငျးအတှငျး ကိုဗဈ ပိုးရှိမရှိ သိနိုငျတဲ့ အမွနျစဈကရိယာတှကေို ဈေးခြိုခြိုနဲ့ ရောငျးခပြေးနတောအပွငျ၊ အစိုးရကလညျး အခမဲ့ အိမျတိုငျးကို ဖွနျ့ဖွူးပေးနပေါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ တာဝနျရှိသူတှေ အခုလို တိုးခြဲ့စဈတာတှေ မလုပျဆောငျပေးနိုငျသေးခြိနျမှာ၊ ငှကွေေးပွညျစုံသူတှအေနနေဲ့ အလှူဒါနအဖွဈ၊ Test Kit တှေ အမြားကွီး ရှိနတေဲ့ မွနျမာ့အိမျနီးခငျြးတှကေနေ အလှယျတကူ တငျသှငျးထားကာ၊ ဒီ အမွနျစဈကရိယာတှကေို စာသငျကြောငျးတှေ၊ ဖုနျးကွီးကြောငျးတှေ၊ ဒသေန်တရဆေးပေးခနျးတှနေဲ့ အလုပျနရော (စကျရုံအလုပျရုံ) တှကေို ကူညီပေးပွီး၊ အခမဲ့ စဈပေးဖို့ ပွငျဆငျသငျ့ပါပွီ။ အခုလို ပိုစဈပေးတာကွောငျ့ ကူးစကျခံရသူ ပိုမြားမြားတှလေ့ာတာက လုပျငနျးတှအေတှကျ တကယျ့ပွဿနာမဟုတျဘဲ၊ မကူးဘဲ ကနျြနသေူတှနေဲ့ ဖွညျ့လုပျနိုငျပါသေးတယျ။ တကယျ့ ကွောကျစရာ ပွဿနာက ကူးစကျခံရမှနျး မသိဘဲ အပွငျမှာ သှားလာ၊ အလုပျဆကျလုပျနရေသူတှကွေောငျ့ ကူးစကျမွနျပိုး တခွားသူတှကေို တဟုနျထိုး ကူးစကျပွီး ထိနျးမနိုငျသိမျးမရ ဖွဈသှားနိုငျတာပါ။ ဒီရောဂါအတှကျ ကုသဆေး မရှိသေးခြိနျ ကာကှယျတာပဲ တတျနိုငျတာမို့ ပုံမှနျ Mask တပျတာကို အပွငျထှကျတိုငျး၊ အထူးသဖွငျ့ အလုံပိတျ စားသောကျဆိုငျတှေ၊ ဈေးကွီးတှနေဲ့ ဘတျစကားတှမှော မဖွဈမနတေပျဖို့၊ Mask မရှိသူတှကေို အခမဲ့လှူဒါနျးပေးပွီး တပျလာအောငျ စောငျ့ကွညျ့တိုကျတှနျးပေးသငျ့ပါပွီ။ အပွငျကနေ ပွနျရောကျလာတိုငျးလညျး အိမျမှာ အလုပျမှာ လကျပွနျဆေးသငျ့ပါတယျ။
အခုလိုအခြိနျမှာ ကိုဗဈ သံသယလက်ခဏာတှေ ဖွဈလာပါလညျး လူတိုငျး ဆေးစဈနိုငျလြှငျ စဈပွီး၊ မစဈနိုငျလြှငျတော့ သီးသနျ့ခှဲနေ အလုပျမဆငျးဘဲ အနညျးဆုံး (၅) ရကျ သကျသာသညျအထိ နသေငျ့ပါတယျ။ ဖြားနာခြိနျမှာ ကိုယျ့ဟာကိုယျ အောကျဆီဂငျြတိုငျးတာ၊ ရမြေားမြားသောကျတာ၊ ဖွဈလာတဲ့ လက်ခဏာတှေ သကျသာတဲ့ (ဥပမာ အဖွဈမြားနတေဲ့ လညျပငျးနာလာလြှငျ လညျပငျးနာသကျသာစတေဲ့၊ ဖြားလာလြှငျ အဖြားကစြတေဲ့) ဆေးတှသေောကျတာတှေ လုပျပါက၊ ရကျအနညျးငယျအတှငျး ပွနျသကျသာသှားလေ့ ရှိပါတယျ။ အစားအသောကျ ပကျြတာနဲ့ အလုပျမလုပျခငျြအောငျ နှုနျးခညျြ့လှနျးတာတှလေညျး ဖွဈလရှေိ့တာမို့ အနားယူသငျ့ပါတယျ။ တခြိနျထဲမှာ အရှတေ့ောငျအာရှနဲ့ မွနျမာ့အိမျနီးခငျြးနိုငျငံတှမှောလညျး Omicron ကုးစကျမူမြားလာနပွေီး၊ ကာကှယျဆေးထိုးတားသူတှနေဲ့ အရငျမြိုးကှဲ Delta ကူးစကျခံခဲ့ဖူးသူတှမှောပါ ဒီပိုးသဈ Omicron က အလှယျတကူ ကူးနတောကို သတိပွုသငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Omicron ဖွဈလာလြှငျ ဒီကာကှယျဆေးထိုးထားသူတှနေဲ့ အရငျဖွဈခဲ့ဖူးသူတှမှော ပွငျးပွငျးထနျထနျဖွဈတာနညျးပွီး၊ အခြိနျတို (၅ ရကျဝနျးကငျြ) အတှငျး သကျသာသှားတာ မြားတာကိုတော့၊ နိုငျငံတကာမှာ တှထေ့ားတာမို့ ကာကှယျဆေးရလြှငျလညျး အမွနျထိုးထားသငျ့ပါတယျ။
ဒီအကွောငျး ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ သိရှိနားလညျအောငျ ကိုဝငျးမငျးက နယူးယောကျမွို. Wyckoff Heights ဆေးရုံက ညှနျကွားရေးမှူးနဲ့ မွနျမာပွညျက ကိုဗဈလူနာတှကေိုလညျး ဖုနျးကတဆငျ့ ကူညီကုသပေးနတေဲ့၊ ကူးစကျရောဂါအထူးကု ဒေါကျတာဇယြောသကျ ကို ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် Omicron ကာကွယ်ရေးပြင်ဆင်မှု
ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် Omicron ပြင်းထန်နိုင်မူ